Aarthik Abhiyan:अभियान परिशिष्ट
काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको २ दशकपछि बीमा समितिको स्थापना भएको हो । हाल बीमाक्षेत्रले ७ दशक यात्रा पूरा गर्दा समितिको इतिहास भने ५ दशकको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमनसँगै प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप विसं. २०२५ मा बीमा समितिको स्थापना गरेको हो । समितिले जेठ १ मा ५० वर्ष पूरा गरेर...
बीमा समिति जेठ १ गतेदेखि ५०औं वर्ष पूरा गरेर ५१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापना भएको लामो समयसम्म समितिको काम निकै सीमित थियो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा समितिले आफ्नो गतिविधिलाई चुस्त बनाउँदै गएको छ । समितिले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्दै बीमाक्षेत्रलाई कानूनी रूपमै बलियो बनाउने र जनतामाझ व...
आफ्नो स्थापनाको ५१औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गरेको बीमा समितिले अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बीमाविज्ञ तथा व्यवसायीहरूको धारणा : भोजराज शर्मा बीमाविज्ञ पछिल्लो २ वर्षयता नेपालमा बीमाको दायरा बढ्दो अवस्थामा छ । त्यसभन्दा बीमाको विकास भए पनि देशभर पहुँच पुग्न सकेको थिएन । २०४६ सालमा बीमामा उदारीकरण आए...
काठमाडौं । नेपालमा ७ दशकअघि (विसं. २००४ मा) बीमा सेवाको शुरुआत भएको हो । तत्कालीन समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा ‘नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी’ (हालको नेपाल इस्यारेन्स) को स्थापना गरी बीमा व्यवसाय शुरू गरिएको हो । यद्यपि उक्त कम्पनीले तत्कालीन समयमा नेपाल बैंकसँग सम्बन्धी व्यवसायको मात्र ब...
विशेषगरी नेपालमा बीमाक्षेत्रको विकास गर्न बीमा समितिको स्थापना गरिएको हो । शुरूमा अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रूपमा स्थापना भएको समितिले हालसम्म आउँदा थुपै्र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । समितिको प्रमुख कार्य बीमाक्षेत्रको नियमन गर्ने, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने नै हुन् । सोहीअनुरूप समितिले स्थापना कालदे...
विसं. २०२६ वैशाख १४ गते अर्थ मन्त्रालयका अधिरकारी कृष्णबहादुर मानन्धरको अध्यक्षतामा बीमा समितिको पहिलो बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले समितिको प्रशासकीय सचिवको रूपमा लवप्रसाद शर्मालाई ६ महीनाका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै बीमक दर्ता शुल्क रू. २ हजार ५ सय र अभिकर्ता दर्ता शुल्क रू. ५० लि...
वित्तीय विवरणको ढाँचालाई सफलतापूर्वक लागू गर्‍यौं देवेन्द्रप्रताप शाह पूर्व, अध्यक्ष, बीमा समिति म विसं. २०६४ मा समितिको अध्यक्ष हुँदा कम्पनीको वित्तीय विवरणको ढाँचामा एकरूपता हुँदैनथ्यो । त्यसबेला कम्पनीहरूले आफ्नै तरीकाले वित्तीय विवरण बनाउने गरेका थिए । पछि हामीले धेरै मेहनत गरेर वित्तीय विवरण...
श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले कारखाना र कारखानामा काम गर्नेसम्बन्धी ऐन २०१६ लाई विस्थापित गरी २०४८ सालमा श्रम ऐन तथा २०४९ सालमा ट्रेड युनियन ऐन जारी गरियो । यी ऐनहरू कार्यान्वयनमा आएपछि श्रम बजार व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यी ऐन कार्यान्वयनको १ दशक पुग्दा नपुग्दै रोजगा...
कानूनी बनेपछि श्रमिक बीमाको दायरामा आउँदै काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेको छ । तर निर्माण कार्य व्यवस्थित नहुँदा कामदार घाइते हुने तथा मृत्यु हुने जोखिमसमेत बढेको छ । यस्तो जोखिम कम गर्न निर्माण बजारमा विभिन्न प्रविधि भित्रिए पनि त्यसको प्रयोग भने न्यून मात्रा...
सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम भन्ने नारासहित शुरू भएको मजदूर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८...